Ngugobe Abafazi: Indlela Ukuthethelela wakhe?
Njalo scary uma ekhaphela. Kubonakala sengathi izwe emhlabeni luba buthaka, lokhu akafuni ukuba uzikholelwe, angifuni ukuphila. Kodwa kufanele uphile. Futhi une sokukholwa. Futhi into lokunquma.
Ngakho, uma usufundile ukuthi kwakukhona ukukhashelwa umkakhe, udinga khona ngize ngiyeke kuphela okufanayo. Yini wena obungayenza bathandile ukuba asithathe lesi sinyathelo sokuqala kungenzeka okungalungile. Heat okwamanje, ungenza konke, futhi akunakwenzeka ukuba konke okwenzeka ungangezanga izinkinga ezengeziwe. Into engcono kakhulu ngakho uzoshiya emuva kuleso simo bese cool. Kungcono ukuba seduze othandekayo - eyodwa manje ukuze kube nzima kakhulu. Okokuqala, ukuthi ngokwesiko yakhetha kaningi ngemva ukukhashelwa umkakhe - kuyinto utshwala. Yiqiniso, kunzima kulesi simo ukuze uhlale, kodwa kungcono ukuba benze lokho kanye. Ukuba usesimweni singenele, ungakwazi futhi wenze ukwelelesa esimweni esasikuso engathandeki. Ngaphezu kwalokho, utshwala obuningi akuthathi isixazululo eyanele, abakhulu nabancane kuleli cala, it is kuyaqabukela kungagcini, ngakho-ke kungcono hhayi ukuyisebenzisa nhlobo.
Ukuze ngokushesha ukunqanda isimo sengqondo kudingekile ukwenza okuthile ubungeke wathumba ngokuphelele futhi wenze lutho akusho ukuphika hhayi, ngaphezu Yiqiniso, umbhedo lowo. Ungathenga zonke yini sasifuna phambi, noma ngisho into edingeka futhi abazi kanjani ukuyisebenzisa - ulwazi olusha namakhono wamukelekile. Akukona kulimaze noma ushintshe isithombe - lena nethonya elinamandla kakhulu ku isimo esingokomzwelo. It unikeza zonke ubuhlanya.
Uma izimo zivuma, kufanele ngokucophelela ngangokunokwenzeka ukuze sihlaziye isimo. Ingabe kunengqondo ukuba uhlukane lobu buhlobo? Uma nezixhumanisi kancane, cishe ukuze ukhombe ekuhlaleni ndawonye lapho. Kodwa ivelakancane: ngokuvamile abantu baphile isikhathi eside eshadile, banezingane, bese kufanele uhlole. Ngemva kwayo yonke leminyaka ube abangane abakhulu, futhi manje yena ihlangabezana kaningi njengokuthanda kwakho, lokho ngokuqinisekile. Ngaphezu kwalokho, ngo-ubuhlobo bomkhaya akulona yokuthi iphutha kwaba othile owodwa: ukukhashelwa umkakhe ngokuqinisekile akuzange kwenzeke nje ngoba kukhona okuholela lokhu. Mhlawumbe wayemane balindele kuwe into wazinika isikhathi imnikeze isikhathi abazange baqonde noma awazange asinakekele, futhi umuntu nje walithatha, ngakusebenzisa ngokunenzuzo ukuba isimo? Ekugcineni, ukukhashelwa umkakhe - esibi izinto ngokungathi sína, kodwa iphutha, futhi ubani nje phakathi kwethu akuwenzi?
Mhlawumbe kunengqondo ukuthethelela ukungathembeki? Kukhona akulona iqiniso ukuthi abantu besilisa abakwazi uthethelele ukungathembeki ngumkayo, ukuthi is diki of ababuthakathaka. Vele ukuba ezibuthakathaka okufanayo - ukuze uzibalekele izinkinga, futhi ikhono lokuthethelela - njengendlela natures eqinile futhi eliqinile. Yiqiniso, lokhu akulula kangako, ngoba amadoda ukukopela unkosikazi wazibonela nzima kakhulu futhi kubuhlungu, ikakhulukazi labo alibonisi imizwa yakhe ngaphandle. Abantu abanjalo kungaba kuwufanele bese bethola indlela aphume imizwa lapha ephelele ukuze senze imisebenzi yokuzilibazisa asebenzayo phezulu emidlalweni eyingozi. Kungenzeka futhi ngokokuqala ukuya kwelinye idolobha noma kwelinye izwe, uthole ukuvela okuningi, futhi uzizwa cishe evamile. Ngezikhathi ezinjalo, buthule, ngaphandle ezingezinhle, udinga ukukhumbula ukuphila ndawonye, konke okuhle ukuthi ungaboshwa ngani, kodwa kuphela ukubiza futhi ithintane nje akudingekile, ngoba ngemva konke okudingayo, futhi limnike wokuthi ayekwenzile nolahlekelwa ukuqhubeka lokhu kwenzeka futhi.
A isinyathelo maqondana
Uma uzizwa ukulungele ukuthethelela komuntu oshade naye, kodwa kungathatha izinyanga ezimbalwa, bese kudingeka ubuye kancane kancane. Okokuqala kulula ukuhlangabezana bese ukhuluma ensimini hlangothi, isibonelo, cafe, ukuze impela ukuqonda ukuthi ungenza noma cha, bese isimo sizobonisa ngokwayo. Ngaphezu kwalokho, ukubuya kancane kancane ngeke nje kuphela kukuzuzise ubuhlobo kuvuselelwe.
Kuthiwani uma inkosikazi kushintshile
Uyazi kanjani ukuthi indoda inenkosikazi? Ukuguquka kwansuku zonke kanye nezizathu ezijwayelekile
10 izimpawu ukuthi ukukopela umyeni ungazi ngisho nokwazi
Okwenza abantu bashintshe: 5 izizathu zangempela
Kungani ukushintsha unkosikazi futhi ubani okufanele asolwe?
Diamond namacici izikopelo - isipho esikhulu ladies lovely
Mushroom umhluzi. Izinketho ukupheka kanye nezincomo
IDonetsk Ukwakhiwa Izinto
Izidakamizwa ngoba migraine - triptans. Umthamo futhi izici isinyathelo
Jasmine kanjani mncane? Iyini imfihlo lobumbano umculi?
Iphaneli for izindonga ngaphansi kwedwala - isixazululo izihlakaniphi wezangaphakathi
Cypress: Tshala Ukunakekelwa ekhaya
Visa ukuze Montenegro: indlela avule umnyango Adriatic
Olga Medynich: Filmography, biography, empilweni yakho
Turpentine wamafutha: yokusetshenziswa